Miorina amin'ny tantara marina ve ny Tanoran'ny Mey? Ny K-Drama ho avy dia hifantoka amin'ny tantaran'ny fikomiana Gwangju - Pop-Kolontsaina
Miorina amin'ny tantara marina ve ny Tanoran'ny Mey? Ny K-Drama ho avy dia hifantoka amin'ny tantaran'ny fikomiana Gwangju
Ilay tantara koreana ho avy, Youth of May, dia mampanantena ny tsy hitovizany amin'ireo tantara nampisehoana vao tsy ela akory izay. Ny tantaram-pitiavana mety mampalahelo dia napetraka tao amin'ny taona 80 tany Korea atsimo, vanim-potoana izay tsy dia notsidihina firy afa-tsy ilay valiny malalany 1988. Toy ny valiny 1988, ny mpijery dia tokony manantena ny hamoahana tantara iray manohana ny zava-misy marina.
Fa firy amin'ny Tanora Mey no marina? Raha manondro ny toetran'ireo seho ho tantara foronina avokoa ny mariky ny fampisehoana rehetra, dia manondro ny mpijery ny zava-nitranga mampalahelo tamin'ny fikomiana Gwangju tamin'ny taona 1980 ny teboka marobe sy ny sary mihetsika fampirantiana.
Mety ho fantatry ny sasany ny hetsika, satria hetsika ara-tantara rakotry ny mpanoratra mpandresy nahazo Booker Prize iraisam-pirenena, ny tantaran'i Human Kang, Human Acts.
Jereo ity lahatsoratra ity amin'ny Instagram
Lahatsoratra zarain'ny KBS Drama (@kbsdrama)
Vakio ihany koa: Vincenzo Episode 19 sy 20: Rahoviana ary aiza no hijerena, inona no antenaina, ary ny zava-drehetra momba ny seho farany nataon'i Song Joong-ki
Momba ny inona ny Tanora Mey?
Ny Tanoran'ny Mey dia mitantara ny tantaran'ny tanora roa izay nifankatia nandritra ny Fikomiana tao Gwangju izay nitranga tamin'ny Mey 1980.
Hwang Hee-tae (Lee Do-hyun) dia mpianatra mpitsabo ao amin'ny Oniversitem-pirenena Seoul izay nanemotra ny fahazoana diplaoma noho ny fijaliana nahazo azy taorian'ny tranga. Niseho tamim-pitandremana, malefaka ary somary tsy nahy i Hwang Hee-tae miasa mafy mba handresena ny fitsarana an-tendrony natrehin'ny fiaraha-monina rehefa notezain'ny reny tokan-tena.
Kim Myung-hee (Go Min-si) dia mpitsabo mpanampy mandritra ny telo taona amin'ny asany, izay tsy matahotra hijoro amin'ny lehibeny manoloana ny tsy rariny. Izy irery no mpamatsy vola ny fianakaviany ary miasa mafy manampy ny marary.
Hwang Hae-tee sy Kim Myung-hee dia raiki-pitia, ary samy niovaova tamin'ny farany tamin'ny Youth of May. Na izany aza, ny zava-nitranga manodidina azy ireo dia nametraka izay mety ho fiafarana mampalahelo.
Ny tarehin-tsoratra hafa ao amin'ny Youth of May dia ahitana an'i Lee Soo-chan (Lee Sang-yi), mpandraharaha miasa amin'ny orinasam-barotra ary mifandray amin'i Kim Myung-hee, ary koa ny rahavavin'i Lee Soo-chan, Lee Soo-reon (Keum Sae -rok), izay miady ho an'ny fahamarinana ara-tsosialy.
Vakio ihany koa: Miverina i Vincenzo miaraka amin'ny Episode 17 aorian'ny fiatoana: Rahoviana sy aiza no hijerena, inona no antenaina ary ny fizarana vaovao
Inona ny fikomiana any Gwangju?
Ny fikomiana dia iray amin'ireo fikomiana lehibe indrindra tao amin'ny firenena satria nikomy tamin'ny governemanta tsy refesi-mandidy Chun Doo-hwan ny mpianatra. Olona maherin'ny 100 no maty; na izany aza, ny tombana avy amin'ny olom-pirenen'i Gwangju dia milaza fa mety ho mihoatra ny an'arivony ny isan'ireo maty.
Nandritra ny fikomiana tao Gwangju, Chun Doo-hwan dia nandefa miaramila, mpiambina parasy ary hery manokana hamehezana ny korontana. Nomeny alàlana izy ireo hikapoka ireo mpanao fihetsiketsehana sy hamoaka tanky.
Nifarana tamin'ny volana Mey ny fikomiana, rava ny tanànan'i Gwangju. Na izany aza, ny fikomiana tao Gwangju dia nanjary iray amin'ireo hetsika demokratika lehibe indrindra tany Korea atsimo sy Azia Atsinanana. Chun Doo-hwan dia voaheloka noho ny fikomiana, fikomiana ary kolikoly, saingy nahazo famotsoran-keloka izy avy eo.
Vakio ihany koa: 'Drunk-Dazed' an'i ENHYPEN: hitan'ny mpankafy an'i K sy EJ mpifaninana amin'ny MV
Ahoana ny fomba hanehoan'ny Tanora Mey ny Fikomiana ao Gwangju?
Ny Fikomiana tao Gwangju dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny tantaran'ny Koreana Tatsimo, ary ny fomba anehoana izany ao amin'ny Youth of May dia zavatra tokony hotandremana. Raha jerena fa ny tantara an-tserasera Koreana dia matetika tsy mandeha amin'ny herisetra mahery vaika noho ny laharana fanamarihana, ny Tanoran'ny Mey dia mety hifantoka amin'ny fiantraikan'ny fikomiana amin'ny olona.
Tao amin'ny tranofiara teaser an'ny Youth of May, nitantara i Hwang Hee-tae an'i Lee Do-hyun:
'Raha loharano hafa feno tara-masoandro izy io, dia ho tian'izy ireo toy ny volon'ny lohataona. Ho niaina fiainana tsotra izy ireo niaraka tamin'ny nofy tao am-pony. Tantaran'ny tanora. '
Ny tranofiara koa dia misy endri-tsoratra mandositra ny mpanafika, ary ny tranofiara hafa koa dia misy feon'ny poa-basy. Ny Youth of May dia nahazo isa 15+ ihany koa, noho izany ny mpankafy dia tokony hanantena fa ho maizina kokoa noho izany ny ankamaroan'ny tantara an-tsehatra.
Mampanantena ny Youth of May fa hiroboka ao anaty iray amin'ireo toko mampanaintaina indrindra amin'ny tantara Koreana Tatsimo.
Ny premieran'ny tanora May dia KBS2 amin'ny 3 mey ary alefa isaky ny alatsinainy sy talata.
Zahao ireo tranofiara fanaovana teaser etsy ambany.
tsy hahita fitiavana intsony aho
inona no tonga amin'ny netflix aogositra 2019
ahoana no ahalalanao raha misy mpiara-miasa aminao tia anao
ny fomba hanehoana olona tianao
firy taona i eddie guerrero